Qalabka telefishanka koronto ee Shiinaha ayaa mar uun maqal qaylodhaan la yaab leh - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » SAYNISKA Raadiyaha-telefishanka xiisaha leh ee ka socda Shiinaha ayaa mar uun maqlaay qaylo-dhaan la yaab leh oo bannaan - BGR
Shiinaha wuxuu ku qaatay shan sano iyo ku dhawaad ​​200 milyan oo doolar dhismaha telifoonkiisa shanta mitir ee loo yaqaan 'FAST'. Waxay ahayd hawl-qabad weyn, laakiin natiijadu waa mid la yaab leh oo tikniyoolajiyadeed ah, waa telefishanka raadiyaha buuxa ee adduunka oo dhan. Hadda, maadaama Shiinuhu diyaar u yahay dib u eegis kama dambays ah oo ku saabsan mashruuca la dhammaystiray dabayaaqada bishan, saynisyahannadu waxay sheegeen inay durba u isticmaaleen qalabka teleefishinka si ay u ogaadaan farriin caan ah oo la yaab leh oo radiyo ku sii jeedda.
Waqti ilaa waqti, telefishanka raadiyaha ee Dunida waxay ka ogaadaan calaamadaha quwadda leh ilo aan la garanaynin. Raadiyadan raadiyaha degdegga ah (oo loo soo gaabiyo FRB) ayaa had iyo jeer ah toosh toos ah, laakiin in yar oo ka mid ah ayaa la arkay iyaga oo isu celcelinaya xilliyo muuqdo oo aan kala go 'lahayn. Digniin gaar ah, oo loo yaqaan 'FRB 121102,' waxaa lagu tiriyaa inuu u muuqday mar labaad iyo mar labaad, iyo telescope Shiinaha oo dhan-cusub. maqlay cod dheer oo cad .
Qofna runtii ma yaqaanno waxa abuuraya FRB, taasina waa qayb ka mid ah waxa iyaga uga dhiga inay u xiiso badan saynisyahannada. Xaqiiqda ah in badankood ay yihiin saacado, laakiin in kuwa kale, sida FRB 121102, ay dib u soo celiso lafteeda, waxay ka dhigeysaa geedi socodkii iyaga ka sii dhiirrigelinaya xitaa waxyaabo aan qarsoonayn.
Marka dib u eegistaas la sameeyo, FAST wuxuu noqdaa telescope la aqbali karo oo laga raadiyo adduunka. Jiang Peng, injineer ka ah shirkadda FAST, ayaa hadal uu soo saaray ku yiri. "Soonku wuxuu u furan yahay cilmiga xiddigiska Shiinaha ilaa bishii Abriil 2019. Kadib aqbalaadda dhismaha qaranka, astronno-yaqaannada adduunka oo dhan way furi doonaan. "
Kooxda cilmiga ah ee adeegsanaya FAST calaamadaha lagu garto ee tilmaamaya FRB 121102 bisha Agoosto 29, iyagoo maqlaya "in kabadan dhawr iyo toban meelood" oo ka mid ah calaamadaha. Dhacdadan qaaska ah waxay ahayd mid si gaar ah muhiim u ah maxaa yeelay ma jiro telescope kale oo Earth ah oo waligiis soo ogaaday soo noqnoqoniyo badan oo tilmaam ah muddo gaaban gudaheed, taas oo soo jeedineysa in awoodda cajiibka ah ee telifoonka cusub ee Shiinaha uu gacan ka geysan karo furitaanka siraha astaanta.
FAST waxay lahaan doontaa gacmo buuxa, cilmi baarayaashu waxay rajeynayaan inay u adeegsadaan cilmi baarista socota ee miiqyada fog, waxyaabo ay ka mid yihiin hydrogen, iyo dabcan raadiyeyaal dheeri ah ee Radio Bursts.